अन्तत: नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्यो, बन्यो यस्तो सहमति ! सम्झौता संशोधन गर्न भारत सहमत - Public 24Khabar
Home News अन्तत: नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्यो, बन्यो यस्तो सहमति ! सम्झौता संशोधन...
अन्तत: नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्यो, बन्यो यस्तो सहमति ! सम्झौता संशोधन गर्न भारत सहमत
अन्तत: नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्यो, बन्यो यस्तो सहमति ! सम्झौता संशोधन गर्न भारत सहमत Nepal – India
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएर प्रचारप्रसारमा लाग्दा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ज्यादै उत्साह थियो । त्यो उत्साह देशभरका नेता कार्यकर्तामा सञ्चार भयो । चुनावी परिणाममा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा उत्साह प्रकट भयो ।
त्यो चुनाव भएको मंसिर २१ गते ३ वर्ष पूरा भइसक्दा नेता, कार्यकर्ता र जनतामा निराशा छाएको छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको फागुन ३ गते ३ वर्ष पूरा हुँदैछ तर चुनावमा गरेका वाचा पूरा हुने सुखद संकेत देखिएको छैन । रेलदेखि पानीजहाज ल्याउनेसम्मका आकर्षक घोषणाहरू अलपत्र परेका छन् ।
आमनिर्वाचन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्काे विवाद, प्रतिपक्षी कांग्रेस आक्रोशित भएर सडक आन्दोलनमा र गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने उद्देश्यसहित राजावादीहरू सक्रिय भएर ओली घेराबन्दीमा परेका छन् ।
मनपरी गर्दा पार्टीभित्रै विवाद
पार्टी एकीकरण हुँदा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का साझा सपना, साझा उद्देश्य थिए, साझा गन्तव्य थिए । तर सरकारले काम गर्दै जाँदा गडबडी भएको छ । सरकारले २ वर्ष ढुक्कले काम गर्दा पनि नतिजा नदेखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरू खुलेरै ओलीविरुद्ध लागेका छन् ।
ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाउने गरी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयमा मोर्चाबन्दी कसेका छन् । ओली नेतृत्वमा सरकार असफल भएको र सरकारका कारण पार्टी समेत बदनाम भएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा छुट्टै प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । प्रचण्डले पार्टीको रक्षाका लागि ओलीले त्याग गर्नुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन् । तर ओली भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ठीक काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
ओलीले पार्टीमा एकलौटी र मनपरी गरेका कारण विवाद चर्किएको अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको मनपरी रोक्न पार्टीमा धेरै छलफल, बैठक भएका हुन् । तर उहाँमा सुधार आएन । उहाँ सुध्रिने अवस्था पनि छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब उहाँ आफैंले राजीनामा दिने कि पार्टीले निर्णय गरेर हटाउने भन्ने मात्रै हो ।’
यसअघि नेकपामा विवाद चर्किएका बेला महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्ट कार्यविभाजन गर्दै ओलीले पार्टीको सल्लाह र परामर्शमा सरकार चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर ओलीले प्रचण्डसँग सहमति नै नगरी एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि विवाद ब्यूतिएको हो । ओलीले पार्टीका निर्णय समेत नमान्ने, एकलौटी र मनपरी गर्दै जाने तथा कार्यशैलीमा सुधार नआउने निष्कर्षसहित प्रचण्ड पक्ष बिच्किएको छ ।
Previous articleरमेशको बच्चा खेलाउने कल्पनाको रहर , बिहे सकिए लगत्तै कल्पना मिडियामा किन ? Ramesh Prasai , Kapana
Next articleअन्ततः सपनाको लागी जापानबाट रातारात आयो बहुमुल्य उपहार,सपनालाई पहिलोपटक मिल्यो यत्तीधेरै खुशी Sapana